အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ဆေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ဆေး
Posted by မှော်ဆရာ on Dec 1, 2010 in News | 29 comments
အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ဖော်ပြလို့ မကုန်နှိုင်အောင်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အင်တာနက် နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲ မခွဲမခွာ တွဲပါလာတာကိုလဲ မြင်နေရပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အဆင့်အလှမ်းကွာနေတဲ့ spyware,mailware,virus စတာတွေကို မပြောလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့မျက်စိထဲ ကန့်လန့်ဝင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာက အမျိုးကောင်းသမီး တွေရဲ့ ဘာညာကိစ္စ ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယို များစွာကို ကာယကံရှင်မသိပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စေတနာကြီးမားစွာနဲ့ ဝေငှ(share) အလုပ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါကို ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။
နာမည်ကြီးချင်လို့၊လူသိများချင်လို့ (ဒါမှမဟုတ်) ၀ါသနာအရ ကိုယ့်ပုံကိုယ်တင်တာဆိုရင်တော့ လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လဲ ကြည့်ရှုအားပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ဆို ရိုးရိုးသားသား နေတာကို ချောင်းရိုက်ခံရတာတို့၊ ကိုယ့်ချစ်ချစ်နဲ့ လွပ်လွပ်လပ်လပ်နေတာကို မှတ်တမ်းတင်ခံရတာတို့ကတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။ အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိကာမှပဲ ကျောချမှ ဓါးပြမှန်းသိရတဲ့ကိစ္စပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူကကို ဖော်ကောင်လုပ်ပြီး အင်တာနက်ပေါ် တင်ပေးတာပါ။ ဒီကိစ္စကို အမျိုးသမီးများ ကျပ်ကျပ် သတိထားစေချင်တယ်။ တချို့ဆို ဒီကိစ္စကြောင့် အလုပ်အကိုင်ထိခိုက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာမပြရဲအောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ အရင်းခံကတော့ မသိနားမလည်မှု၊ နည်းပညာ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဆိုတာ တွေ့နေရပါတယ်။အမျိုးကောင်းသမီးများအနေနဲ့ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေက ရှောင်လွဲနှိုင်အောင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပေးချင်တယ်။
မှန်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင်ဖြင့် နားလည်တန်ကောင်းပါရဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့လို့ကမဖြစ်ပါဘူး..။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ သတိထားစရာအချက်တွေပေါ့ဗျာ…။ အင်တာနက်မင်းသမီး ,မင်းသားတွေမဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်သင့်တာ ဆင်ခြင်ကြပါလို့ပဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လုပ်တဲ့လူကတော့ လုပ်ကိုလုပ်မှာပါဘဲ
ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီလို အချက်အလက်တွေကို သူသူငါငါကလည်း သတိထား ကို ထားရမှာပါဘဲ။
( မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး နောင်ဆို ဟိုမော်ဒယ် လေးနဲ့ဟော်တယ်တွေမှာမချိန်းတော့ဘူး
ဘကြီး စံမြိုင် ကောက်ရိုးပုံ က ပိုပြီးစိတ်ချရတယ် ဆိုတော့ ဒို့ ကတော့ ဒို့ ကတော့ ကောက်ရိုးပုံ မှာဘဲ ချိန်းတော့မယ် ဟီဟိ သိုင်းကျူးဗျာ )
သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေပါ… Forward ပေးလိုက်မယ်နော်… စိတ်မဆိုးဘူး မဟုတ်လား ကိုမှော်စရာကြီး… (ဟဲဟဲ ကျွန်တော့်ထက် ကြီးလို့ ကို တပ်ခေါ်လိုက်တာ)
အခုနောက်ပိုင်းဒီလိုတွေကြုံတွေ့နေရတာက ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေ အဖြစ်များတာ တွေ့ရပါတယ် ။ ကျောင်းတက်ရာကနေ အပေါင်းသင်းစုံတော့ အင်တာနက်ဆိုင်လေးထိုင်တက်လာတယ် … အဲ့ဒါတွေကနေ စတာပါ ။ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတွေ အရင်ကဆိုရင် ဆယ်တန်းအောင်မှ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းလေးဘာလေးတက်ကြပေမဲ့ … အခုတော့ အိမ်မှာ ကွန်ပျူတာတွေ ထားနိုင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်လာတော့ အထူးတလည် သင်တန်းတက်ဆရာမလိုပဲ အစ်ကို၊အစ်မတွေဆီက ပြန်သင်လာနိုင်ကြတယ် ။ နောက် အိမ်မှာ အွန်လိုင်းချိတ်မယ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်မှာ အင်တာနက်သုံးမယ် ။ … အဲ့ဒီကမှ အပြောကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့မယ် ..ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ အင်တာနက်မင်းသမီးတွေဖြစ်ကုန်ရောပဲ ။ အမျိုးကောင်းသမီးတွေ အတုယူမမှားသင့်ပါဘူး ။
intro ကတော့ forward share မယ် ပြောသွားပါတယ်။ ဒါ လူတိုင်းသိသင့်တယ်ထင်လို့ ရေးထားတာပါ။လူသိများလေ ကောင်းလေပါပဲ ။
ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ share လုပ်နှိုင်ပါတယ်။ အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေရဲ့ အရှက်နဲ့သိက္ခာကို တစ်ယောက်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကာကွယ်ပေးနှိုင်မယ်ဆိုရင်
Forward Share ခွင့်ပေးပါဗျာ
ပို့စ်ကို ကြိုက်လို့ပါ ၊ အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့
မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မယ်လို့ အသိတရားမရှိသမျှ ကာလပါတ်လုံး
တဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြခွင့်ပြုပေးပါ မှော်ဆရာခင်ဗျား။
တချို့ ကိုကိုများဆို မိန်းကလေးကိုသာ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ရိုက်တာ။ သူတို့ဘယ်သူမှန်း သိမှာကျ သေမလောက်ကြောက်သဗျ။ ကိုယ်ချင်းစာတရား မထားတဲ့ လူ့အောက်တန်းစားတွေ။
မကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း မရိုက်သင့်ဘူး ထင်မိတယ်။ သူတို့ခမျာလည်း မိသားစု အသိုင်းဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ရှိတာကိုးဗျ။
မှော်ဆရာကြီးကတော့ သတိပေးနေပြီ။ အမျိုးကောင်းသမီးများ မှတ်သားကြပေတော့။
အရမ်းကောင်းတဲ့ စာလေး တစ်ပုဒ် ပါပဲ ဗျာ ။ အခုမှ ဖတ်မိပေမယ့် ဖတ်ပြီးပြီးချင်း အရမ်းကြိုက်သွားပါတယ် ။ ဘော်ဒါတွေ အားလုံး ကို လည်း ပြန်ပြောပြ လိုက်ပါမယ် ဗျာ
“ခိုးအရိုက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ဆိုရင် ကိုယ်မရင်းနှီး မကျွမ်းဝင်တဲ့နေရာမှာ (ဟ်ာတယ်၊တည်းခိုခန်း၊ပန်းခြံ) စတဲ့နေရာတွေမှာ လွပ်လွပ်လပ်လပ် မနေပါနဲ့ ။သတိရှိပါ။”
မှန်ပါတယ်။ သတိဆိုတာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလေ။ supermarket တို့လို အများသူငှာနှင့်ဆိုင်သောနေရာများ (Public area) များမှာ cctv တပ်ထားမယ်ဆိုရင် မြင်သာအောင် စာရေး၍ဖြစ်စေ၊ သင်္ကေတနှင့်ဖြစ်စေ ရေးပြရတာ ကျင့်ဝတ်ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တာဝန်ပါ။ ဒီလို သိသာအောင်မလုပ်ပေးထားတဲ့ နေရာမျိုးဆိုရင်တော့. . .
အ၀တ်လဲခန်းထဲမှာတောင် ကင်မရာ တပ်ထား/မထား. . . အင်း. . .
ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးကြပါခင်ဗျား…….. နောက်ပိုင်း တော်တော်များများတွေ့လာရလို့ပါ။
ကို့ချစ်သူကိုတောင်မယုံကြပါနဲ့….. ယုံလို့ပုံအပ်ချင်ရင်တော့ မီးအမှောင်လုံးဝချထားဖို့
မမေ့ပါနဲ့… ခဏခဏတွေ့နေရပါပြီး ….. အရေးကြီးပါတယ်…..သတိရှိကြပါခင်ဗျား။။။။။
မှတ်လည်းမှတ်သားထားပါတယ် …. ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် ။ တကယ့်ကို လိုအပ်တာတွေကို သေချာပြောပြပေးသွားတဲ့ အတွက် …..
ပြန်ပြီး forward လုပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ရှင်…
ကို ပုပြောတာမှန်တယ် ကျွန်တော်တို. ရွာက ကောက်ရိုးပုံ ကိုတောင်သတိရတယ်
ကောက်ရိုးပုံလောက်တော. ဟော်တယ်က စ်ိတ်မချရဘူး
ကောက်ရိုးပုံက စပ်တာလေးတစ်ခုပဲ အပြစ်ရှိတာ
လူတွေကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဒုက္ခပေးချင်သူတွေများလာတယ်နော်
ဗလိုင်းကြီး စာပြီးနားမလည်း ၀ါးပြီးထွေးထုတ်တဲ့ကောင်တွေကတော့ နောက်ဘ၀ ဒင်းတို့ဘာဖြစ်မလဲ ကြည့်ချင်သပ
လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ခွဲနီးပါးလောက်က ပို့စ်လေး ပြန်အသက်ဝင်လာတာပါလား ။
ူအများအတွက် အကျိုးများစေတဲ့ ပို့စ် ကိုတင်ပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပါ၏။ ကောင်းပါ၏။ လူအများအတွက်အကျိုးရှိပါ၏။
ဒီလို ပိုစ့်မျိုးရေးပေးတဲ့ မှော်ဆရာကို သောင်းသောင်းဖြဖြ အားပါးတရ ကြိုဆိုကြောင်းပါ။
ဒီပိုစ့်ကို မဖတ်ရသေးတဲ့သူများ ဖတ်ရအောင် လူလယ်လုပ်ပြီး ကွန်မန့်ပေးလိုက်ပါ၏….